Mandresy ny mesian'Andriamanitra
"1 Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena? 2 Ireo mpanjakan’ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko Hanohitra an’i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe: 3 "Aoka hotosantsika ny famatorany, Ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany." 4 Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo. 5 Dia hiteny azy amin’ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin’ny fahatezerany hoe: 6 "Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin’i Ziona, tendrombohitro masina." 7 "Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao andro-any. 8 Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran’ny tany ho fanananao. 9 Hotorotoroinao amin’ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy." 10 Ary amin’izany dia hendre hianareo, ry mpanjaka; minoa anatra hianareo, ry mpitsaran’ny tany. 11 Manompoa an’i Jehovah amin’ny fahatahorana, ary mifalia amin’ny fangovitana. 12 Manoroha ny Zanaka, fandrao ho tezitra Izy, ka ho very eny an-dàlana hianareo; Fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy." Salamo 2:1-12
Mikambana ny fahavalo mba hanohitra (1-3). Mahay mikambana ny fahavalo hiady amin’ny mpanjaka apetraky ny Tompo toa an’i Davida. Mbola hita taratra io taty amin’ny Testamenta vaovao. Ilay voahosotr’i Jehovah avy amin’ny taranak’i Davida no notoherin’ny firenena hovonoina (Heroda sy Pontio Pilato ary ireo mpanapaka ny Isiraely). Tsy nahatsapa akory ireo mpiaramiombonantoka amin’ny ratsy ireo fa nahatanteraka ny fikasan’Andriamanitra ny amin’ny famonjena izao tontolo izao (Asan’ny Apostoly 4:24-28). Hita taratra hatramin’izao ireo endrika fanoherana, na fitsipahana ireo eo anivon’ny asa fitoriana ny Filazantsara. Ny fijoroana ho vavolombelona sy ny fahatokiana Ilay Mpamonjy izao tontolo izao no hery hoentina handresena izany.
Manjaka any an-danitra sy ety an-tany ny Tompo (4-9). Voafetra ny hery, ny fahefana, ny fahalalan’ny firenena ety ambany masoandro satria ny Mpahary izao tontolo izao no manoratra sy mifehy ny tantara. Tahotra sy horohoro no ataony ao anatin’ireny mpanohitra Azy ireny (5). Mbola hahita hatramin’ny faran’izao tontolo izao ny firenena rehetra fa mandresy Ilay Mesian’Andriamanitra. Jesosy kristy zanak’Andriamanitra velona izay maharitra mandrakizay no hanjaka sy handresy mandrakizay (Apokalypsy 2:27).
Fahamarinana: Mbola ho avy ny andro handevonan’i Jesoa Kristy an’ireo mpanohitra azy ireo amin’ny fofonain’ny vavany araka ny efa novakiantsika ( 2 Tesalonianina 2:8)
Mahaiza misafidy (10-12). Tena lehibe loatra ny fitiavan’ny Tompo ka mbola mampandini-tena ny mpanapaka, ny olona rehetra Izy handray fanapankevitra hendry, dia ny hiverenana Aminy. Ny fanetrentena hiandany, hialoka amin’ny Tompo no hahazoana fiainana; fa ny fandàvana Ilay Mesian’Andriamanitra dia mitarika ho amin’ny fahaverezana.
Tsarovy: “Sambatra izay rehetra mialoka Aminy” Salamo 2:12
Fampidirana boky Josoa
Mitantara ny fidiran’ny Zanak’Israely ao amin’ny tany Kanana teo ambany fitarihan’i Josoa ity boky ity. Niatrika ady tokoa ny Zanak’Israely tamin’izany : ady amin’ireo tompon-tany izay nahazoana baiko mazava avy amin’Andriamanitra hoe haringana, ady anatiny koa noho ny tsi-fankatoavana ny sitrapon’Andriamanitra teo amin’ny sasany teo amin’ny vahoaka, teo koa ireo fitakiana, fangatahana samihafa tsy maintsy natrehan’i Josoa.
Boky tsara vakian’ny mpitarika manokana koa ity boky ity satria misy lesona betsaka momba ny haitarika azo raisina avy amin’izao tantara voarakitra ato izao. Boky azo hisintonana fampaherezana, fampitandremana ho amin’ny fiainana kristianina andavanandro ihany koa ity boky ity. Ny fidirana ao Kanana mantsy dia tsy hoe fidirana any an-danitra akory fa fidirana eo amin’ny fiainam-pitsaharana tokony hiainan’ny kristianina tsirairay avy dieny ety an-tany.
Hiteny amintsika tsirairay manokana anie ny Tompo avy amin’izao famakiantsika ny boky Josoa izao.